Ukuthinta ama-Worlds of DevOps, ITIL & Agile - ITS Tech School
Ukuthinta ama-Worlds of DevOps, ITIL & Agile
I-DevOps, i-ITIL ne-Agile Impacts
Ukushintsha yisicelo sosuku, futhi manje njenganini ngaphambili, ijubane lebhizinisi kanye noshintsho olusha lukuvuselela. Izinhlangano nezinkampani zibheke abahlinzeki bezinsizakalo ze-IT ukuba baziphendule ngokwengeziwe futhi badlulise izinguquko zesevisi ezivamile ngekhwalithi ephakeme, okuletha ngezinsizakalo ezithuthukisa ngaphezulu ibhizinisi. I-ITIL yindlela yokwenyama yomhlaba jikelele yokudlulisa nokuqondisa imishayo njengesevisi ebhizinisini. Ukukhishwa kuyisimiso sokusheshisa ukuthuthukiswa kanye nokuhlelwa kwezinhlelo zokusebenza (ukusebenzisa izinqubo nezinqubo, isibonelo, isikrini). I-DevOps iyinkolelo noma indlela yokusebenza okungenzeka ukuthi ivume izinzuzo eziphawulekayo nokuthumelela okusheshayo ngokusebenzisa amasu anjalo angama-nimble.
I-DevOps ihlanganisa ingxenye enkulu yezinyathelo zokuphila zesevisi ye-ITIL. Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza (i-Agile) ludlulela phakathi kwe-ITIL yesevisi ngokucacisa ngokuhamba ngezinsizakalo. Ukuphathwa kohlelo lokusebenza kudlula ingxenye enkulu ye-lifecycle ye-ITIL. Ngenkathi umsebenzi wezinsizakalo uqala enkonzweni yezinsizakalo ngokusebenzisa ushintsho lwenkonzo eqhubekayo.
I-DevOps "inhlonipho ihlanganisa" indlela yokubhekana nokuthuthukiswa kwe-Agile:
Ukuhlangana okuphikisanayo nokubandakanyeka kwamaqembu okusebenza namaqembu okuthuthukiswa kwangaphakathi konke ngokusebenzisa impilo yokuthuthukiswa
Ukubandakanya amaqembu okusebenza ngaphambi kwesimiso esingaba khona phakathi kwencazelo yombono nesinqumo senkonzo
Imikhakha yamaqembu osebenza kuma-pretiquisites for technical and application for service kanye neseluleko ekufinyeleleni kwecebo lokuhlongozwa ohlongozwayo
Ukuvuselelwa kwenhlangano evuselelwe ngale ndlela ukunika amandla isikhathi esisheshayo emakethe yezinguquko ezintsha noma ezithuthukisiwe zosizo lokusebenza
Nciphise izinga lokudumala kokukhishwa okusha, ukuvuselelwa kokuqeda okulandelanayo kanye nesikhathi esiphuthumayo sokuphumula uma kwenzeka kudumala ukushintsha
Ukusetshenziswa kwemishini yokusebenza ukuze kuvuselelwe "izinqubo ezivamile", isibonelo, ushintsho olujwayelekile noma ukuvuselelwa kokujwayelekile kokuvuselelwa
Le mibono yokubambisana, ukuxhumana okuthuthukisiwe nokuphendula kwebhizinisi akukona ku-ITIL. Ngempela, isakhiwo se-ITIL sigxile kwimfuneko yokufakwa kokuqala kwezobuchwepheshe kanye nokuphathwa kohlelo lokusebenza amaqembu awusizo ngesikhathi sezinsizakalo zenkonzo, uhlelo lwezinsizakalo kanye nokunyakaza kwenkonzo. I-ITIL ibonakala ukuthi imisebenzi yokusebenza ngamakhono-amaqembu ohlaka lwezobuchwepheshe ikakhulukazi-kufanele anikeze ukululekwa kwekusasa neqembu lokuthuthukiswa ekusekeleni kanye nokuhlelwa kwesicelo esimweni esibukhoma. Kumele futhi banikeze iminikelo emiklamo yezobuchwepheshe "yelungiselelo lenkonzo," kufaka phakathi ubunjiniyela benkonzo, ubunjiniyela bohlelo lokusebenza, ukuhlela ukuklama, ukuklama kwedatha, ubunjiniyela bezinqolobane kanye nokunye.
Amandla Okujoyina AmaFomu
Abasebenzi bokuphathwa kohlelo lokusebenza (abaphethe wonke umsebenzi wokuphila kwabo bonke izicelo-hhayi kuphela labo abadalwa endlini) kufanele bavalelwe ngesikhathi esifanele empilweni yesevisi. Iqiniso liyakutshelwe ukuthi, kufanele ukuthi yibo okufanele basebenze nebhizinisi, lowo muntu ukhonjiswe njengenhloko yezobudlelwane bebhizinisi (BRM) kanye nomnikazi wezinsizakalo ukuba aqaphele, abonise futhi abhale wonke umsebenzi "wokulungiswa kwenkonzo" kanye nokuqinisekisa ukuthi abanjwe enkonzweni yesevisi yenkonzo entsha noma eshintshiwe kucatshangelwa.
Njengoba kuboniswe yi-ITIL, amaqembu okuphatha uhlelo lokusebenza kufanele asebenze ngokusondelene nezintuthuko zokuthuthukiswa ezihlala phakathi phakathi kwensizakalo yezinsizakalo kanye nensizakalo ezithuthukiswa ekuthuthukiseni okusheshayo nokuthunyelwa kwezicelo eziyingxenye yesevisi yokuhlanganisa. Ngenkathi intuthuko ye-nimble igxila ekuthuthukiseni okusheshayo kokuzivocavoca okuqhubekayo mayelana nokuhlelwa kwemisebenzi nokuhamba ngezinsiza, ukuphathwa kohlelo lokusebenza libhekene nesicelo kulo lonke uhlelo lokuphila lwezinsiza kusuka endleleni ngokusebenzisa uhlaka kanye nokuthutha (ukusebenza nentuthuko) nokusebenza nokushintshwa okungahleliwe. Le ndlela iqinisekisa ukuthi uhlelo lwenkonzo (oluqukethe isicelo) luyathumela kahle futhi luqhubeka nokwenza phakathi kokusebenza okubukhoma ukuxazulula izinkinga zamakhasimende namaklayenti ebhizinisi.
Njengo-DevOps, i-ITIL nayo iyathinteka kakhulu ngokusebenzisa "amamodeli" nokusetshenziswa kwemishini yokusebenza ukuze kwandiswe ukukhiqizwa, ukukhishwa kwejubane kanye nezindleko eziphansi. Lokho i-ITIL egcizelela, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka, ukuthi ukuthi iphumelele, umthengisi wenkonzo ye-IT kufanele kuqala abe nenqubo futhi aqhutshwe ngenqubo ngaphambi kokuba aqonde izinzuzo ezidlulele kakhulu zekhompyutha. Ukuguqulwa okujwayelekile noma ukukhishwa "ukuboniswa" kumele kubikwe kuqala futhi kuphulwe phansi, "imishini" kufanele ikhishwe, futhi inqubo kanye nokuxhumana kufanele kuhlungwe futhi kwenziwe kahle. Ngaleso sikhathi kuzoba nezinzuzo ezimbi kakhulu.
Akungabazeki ukuthi i-ITIL yikhungo sembonini esenza kahle kakhulu nge-IT. Yiba ngangokunokwenzeka, abahlinzeki benkonzo ye-IT kumele bazuze futhi bahlanganise imikhuba emihle kakhulu yokuhlelwa kabusha-kuhlanganise ne-Agile ne-DevOps-eye yabonakala ukuthuthukisa ilungiselelo nebhizinisi kanye neklayenti, iphakamise ikhwalithi kanye nokwenziwa kwamasevisi we-IT, ithuthukise ukufaka ukuthutha, nezindleko ezijwayelekile ze-IT.
Ukuze uqhubeke usebenzisa ngaleli phuzu, buka inkambo, i-Intersection of I-DevOps futhi I-ITIL®.